MZ Seminar — MYSTERY ZILLION
October 2009 edited December 2009 in About Forum
ဒီနှစ်ကောကျွန်တော့်တို့ရဲ့ MZ နှစ်ပတ်လည်လုပ်ဖြစ်မှာလားခင်ဗျ.......ဒီတစ်ဆိုရင်တော့ည Dinner ပါ
ခု ကတည်းက ပိုက်ပိုက် စုထားတယ်ဆိုပါတော့......... ဟီးဟီး........
နှစ်ပါတ်လည်ကျမှ Seminar လုပ်မှာလား...... ဒီကြားထဲရော တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ Seminar လေး လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့....... နေရာက မီးမှန်တဲ့ အနော့အိမ်၊ ဆွေးနွေးမှာက ကွန်ပျူတာ အကြောင်း၊ အနော် ပရော်ဂျက်တာ ပါ ငှားပေးမှာ.... အစားအသောက်ကိစ္စကတော့ ၀ိုင်း၀န်းကူညီ ကြက်ခြေနီ၊ နေ့ရက်က အဆင်ပြေမယ့်နေ့...... ကျွန်တော့် အိမ်မှာဆိုရင် ကျဥး်ပေမယ့် လူ 30 လောက်တော့ ဆံ့မယ်၊ (ခုံတော့ မရှိဘူးနော်၊ ဖယောင်းပုဆိုးတော့ ခင်းထားတယ်).... Internet က တော့ Not Sure.............! တစ်ခါ တစ်လေရတယ်... ဘယ်ကလဲ လို့ မမေးကြေး......
ကဲ စ လိုက်ပြီ၊ ဆွေးနွေးပေးကြဦး........
Internet က တော့ not sure.............! တစ်ခါ တစ်လေရတယ်... ဘယ်ကလဲ လို့ မမေးကြေး......
ဘယ်သူမှမလာရင်နေ ကျတော်နေ့့တိုင်းလာမယ် ညပါအိပ်မယ် ..... :d:d:d
လာတော့လာချင်တာပေါ့ကွာ ဒီနှစ်လည်းစာမေးပွဲတိုက်မယ်ထင်တယ်ကွ :2::2::2:
ဟီး ကိုစိုင်းရေ..လုပ်မယ့်နေ့ သာသေချာရင်ပြောပါ...လာပြီးသားပဲ...
ကျနော်လည်း နည်းပညာ ဆွေးနွေးပွဲဆိုရင်တော့ တက်ချင်ပါတယ် ဗျာ .. ဖိတ်ဦးနော်..
နှစ်ပါတ်လည်ကျမှ seminar လုပ်မှာလား...... ဒီကြားထဲရော တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ seminar လေး လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့....... နေရာက မီးမှန်တဲ့ အနော့အိမ်၊ ဆွေးနွေးမှာက ကွန်ပျူတာ အကြောင်း၊ အနော် ပရော်ဂျက်တာ ပါ ငှားပေးမှာ.... အစားအသောက်ကိစ္စကတော့ ၀ိုင်း၀န်းကူညီ ကြက်ခြေနီ၊ ...
မော်ကျွန်းမှာလာလုပ် ...... :d
ဒီ တစ်ပွဲကိုတော့ ကျွန်တော် စီစဉ်မယ်........ Plan ချမယ်........ မြေပုံ ဆွဲမယ်(မည်သို့ မည်ပုံလာရမည်).... ပြီးရင် အလှူ ငွေကောက်မယ်..... လူဦးရေ အတိအကျကောက်မယ်.... ရက်သတ်မှတ်မယ်..... ပြီးတော့ စာတမ်း ဖတ်မယ့် အကြောင်းအရာနဲ့ ဖတ်မယ့်လူ ရွေးချယ်သတ်မှတ်မယ်...... လာရခက်တာ လွယ်တာ တွေ အတွက်တော့ စိတ်မပူနဲ့ အိမ်ကို လာဖို့ ကို ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးကို မြေပုံ ပြမယ်.... :P ....... ကျွန်တော်ကတော့ 11 လပိုင်း second week ထဲ ခန့်မှန်းတယ်..... စာတမ်းဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ ခုကတည်းက စာတမ်းတွေ ပြုစုပြီး ရေးထားပေးတော့ အချိန် မိနစ် 20 ရမယ်........ ကျွန်တော့ အိမ်က ကြိုးမဲ့ မိုက်တွေ ဘာတွေ မလိုဘူး..... (ကျဥး်လို့ ....... )........ အဲ မေ့တော့မလို့....... တခြားနေရာမှာ ကျင်းပချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရတယ်နော်....... အဆိုပြုလို့ရတယ်.........
လုပ်လိုက်လေ.. ကိုစိုင်း ညမဟုတ်ရင် ပြီးတာပဲ လာနိုင်ဖို့ကတော့ ကြိုးစားရမယ်.. အိမ်က ဥပုသ်နေ့လေး ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ.. စျေးပိတ်တော့ ဖရီးပဲ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်.. :d
internet ကို ဘယ်ကနေ ဟပ်ထားတယ်ဆိုလားဘဲ....ဟိဟိ
အစားအသောက်က ကိစ္စမရှိပါဘူး....နင့်အိမ်က စိတ်ချရပါတယ်နော်...တော်ကြာ လူစုပါတယ်ဆိုရင် ဟီး တားတားကြောက်ကြောက်...နင်က နင့် အင်တာနက်ရယူပုံကို စာတမ်းလုပ်ဖတ်ပေါ့နော့....:))
December 2009 edited December 2009 Banned Users
en, haha. good comments:39::39:
Internet ကတော့ အိမ်နားမှာရှိတဲ့ WEP လိုင်းတစ်ခုကို တယ်လီပသီနည်းနဲ့ ပါတ်ပေါ့ ကြည့်ပြီးသုံးပါတယ်။ အဲ့ဒီတယ်လီပသီနည်းကတော့ ကျင့်စဉ်ကို ကိုလူပျိုကြီးကပေးပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကရိယာတွေကို ကိုရောင်စိန်နဲ့ ကိုပရင့်ဧကရာဇ်ကချီးမြင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တယ်လီပတီ မက်စ် ပတ်စ်အိုဗာကိုတော့ ဆရာ ရသာ က ကူညီသွားပါတယ်...............
တယ်လီပသီနည်းကို ကျွန်တော်လဲသိချင်ပါတယ်။:D။ နဲနဲလောက် share ချင်ပူးလားဟင်။:6:။ တိုကြီး စိုင်း